कोरोना संक्रमित मनोज गजुरेलको आईसियूमा उपचार हुँदै, अवस्था गम्भीर ! « Bagmati Online
कोरोना संक्रमित मनोज गजुरेलको आईसियूमा उपचार हुँदै, अवस्था गम्भीर !
काठमाडौ । दशैंको दिन (कात्तिक १० गते) कोरोना भाइरस पुष्टि भएका चर्चित हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेलको स्वास्थ्य अवस्था विग्रदै गएको छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर भएकाले आइसियुमा राखेर उपचार सुरु गरिएको छ । स्वास्थ्य अवस्थामा गम्भीर समस्या देखिएपछि बुधबार बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल भर्ना गरिएका उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छैन । थप समस्या भएपछि उनलाई आइसियुमा राखिएको छ ।